Black ကသကြား Boba | မှထုတ်လုပ်သူကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း Taiwan -bubbleteapowderb2b.com
Black ကသကြား Boba
. ၏ ဦး ဆောင်ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့ဖြစ်ပါတယ် Black ကသကြား Boba in Taiwan အရာအကောင်းဆုံးအရည်အသွေးကုန်ကြမ်းကနေအင်ဂျင်နီယာဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤထုတ်ကုန်များကိုပုံစံအမျိုးမျိုး၊ ပုံစံများနှင့်အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးကိုပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များသည်အရည်အသွေးမြင့်မားသောကုန်ပစ္စည်းများကိုတတ်နိုင်သောစျေးနှုန်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ထံမှရယူနိုင်ပါသည်။
အသစ်တစ်ခုကိုပုံသဏ္andာန်နှင့် texture နှင့်အတူ,ကျွန်ုပ်တို့၏ Brown Sugar Boba ကိုရက်ရောစွာရှာဖွေပြီးသင်၏သောက်သုံးမှုသို့မဟုတ်ရွေးချယ်မှုအချိုပွဲကိုမြှင့်တင်ပါ.အရသာတစ်ခု,အစေခံရန်အဆင်သင့်,ချက်ပြုတ်ရန်မလိုအပ်ပါ,tapocaoka ပုလဲများအတွက်စားသုံးနိုင်သောအစားထိုး!ရေခဲမုန့်ပေါ်တွင်သုံးပါ,ဒိန်ချဥ်,လက်ဖက်ရည်ကြမ်းသောက်ခြင်းနှင့်ကိတ်မုန့်ပေါ်တွင်အလှဆင်,စသည်တို့.
အညိုရောင်သကြားဘီဘာသည်သောက်ရန်အလွန်သင့်တော်သည်,နှင့် slush ထည့်သွင်း,သကြား,သစ်သီးဖျော်ရည်များ,လက်ဖက်ရည်ကြမ်းများ,အေးခဲဒိန်ချဉ်,ရေခဲရေ,ပင်အရက်ကော့တေး.လှုပ်,ဆွဲဆောင်မှုရှိသောအရောင်များကိုထည့်ရန်မည်သည့်ဖျော်ရည်ကိုမဆိုရောစပ်ပါ.
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 http://www.bubbleteapowderb2b.com/my/black-sugar-boba.html
Black ကသကြား Boba ထုတ်လုပ်သူနှင့် Black ကသကြား Boba ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းစ -ကျော် 19,372 ကမ္ဘာတဝှမ်းဝယ်လက်မှာ bubbleteapowderb2b.com
Tapioca ပုလဲ,ပူဖောင်းလက်ဖက်ရည် Tapocaoca Pearl သည်ထိုင်ဝမ်ဖြစ်သည်&တောင်ကြီးမြို့;လူကြိုက်အများဆုံးရိုးရာမုန့်များသည်ခိုင်မာသောအရောင်များကိုထိန်းသိမ်းထားသည်,ဒါကြောင့် Tapioca Pearl တစ်ခုစီကစိန်လိုတောက်ပနေပါတယ်.အရသာ chewy ပေမယ့်ပျော့မဟုတ်ပါဘူး,နှင့်ဖောက်သည်ရွေးချယ်မှုနှင့်အတူအမျိုးမျိုးသောအရွယ်အစားပုလဲရှိပါတယ်. Tapioca ပုလဲကငါတို့ကိုရွှင်လန်းစွာပူစေတယ်!ဒါ့အပြင် boba အဖြစ်လူသိများ,Tapioca ပုလဲစုံလင်သောဖြစ်ကြသည်“ပူဖောင်း&ကဗျာ;ပူဖောင်းလက်ဖက်ရည်၌.သူတို့ကသေးငယ်တယ်,မွှေးပြီးအတန်ငယ် gummy ကိုက်ညီမှုရှိစေရန် tapokaoca acarch မှပြုလုပ်သော round round ဘောလုံး.ငါတို့ငါတို့သည်ပုလဲနို့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်များတွင်အသုံးပြုသောဘီဘာပုလဲများနှင့်တူသည်.အချိုပွဲများတွင်လည်းအရသာ,Tapioca Pearls သည်စွယ်စုံစားသုံးမှုဖြစ်သည်. Tapioca Pearl သည်သောက်ရန်အလွန်သင့်တော်သည်,နှင့် slush ထည့်သွင်း,သကြား,သစ်သီးဖျော်ရည်များ,လက်ဖက်ရည်ကြမ်းများ,အေးခဲဒိန်ချဉ်,ရေခဲရေ,ပင်အရက်ကော့တေး.လှုပ်,ဆွဲဆောင်မှုရှိသောအရောင်များကိုထည့်ရန်မည်သည့်ဖျော်ရည်ကိုမဆိုရောစပ်ပါ.
ရောင်စုံ Tapioca ပုလဲ
ရောင်စုံ Tapioca ပုလဲ,လည်းရောင်စုံ Boba အဖြစ်လူသိများ,ရောင်စုံ Tapioca ပုလဲ,ပူဖောင်းလက်ဖက်ရည်တွင်အကျော်ကြားဆုံးစားနိုင်သောဘောလုံးများဖြစ်သည်,သူတို့အများအပြားအသုံးပြုမှုရှိသော်လည်း.ဒီပုလဲတွေဟာမှောင်မိုက်၊,သို့သော်ပေါ့ပါးသောပုလဲများသည်အရောင်ဖြည့်ရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်.tapokaoca ပုလဲတွေကိုအရောင်ထည့်ခြင်းကလွယ်ကူပါတယ်.ပုလဲကိုချက်ပြုတ်ပြီးအရောင်ဖြည့်စွက်ရန်လိုအပ်သည်.ပြီးတာနဲ့ပုလဲရောင်စုံနေကြသည်,သင်သည်၎င်းတို့ကိုသင်အကြိုက်ဆုံးသောက်စရာထဲသို့ထည့်နိုင်သည်သို့မဟုတ်ကလေးများအတွက်အာရုံခံကစားခြင်းအတွက်အသုံးပြုနိုင်သည်. ရောင်စုံ Tapioca Pearl သည်အချိုရည်အတွက်အလွန်သင့်လျော်သည်,နှင့် slush ထည့်သွင်း,သကြား,သစ်သီးဖျော်ရည်များ,လက်ဖက်ရည်ကြမ်းများ,အေးခဲဒိန်ချဉ်,ရေခဲရေ,ပင်အရက်ကော့တေး.လှုပ်,ဆွဲဆောင်မှုရှိသောအရောင်များကိုထည့်ရန်မည်သည့်ဖျော်ရည်ကိုမဆိုရောစပ်ပါ.
တစ် ဦး ကပူဖောင်းလက်ဖက်ရည်သောက် ISN&တောင်ကြီးမြို့;သငျသညျအထဲမှာ Boba ပုလဲပါဝင်သည်သည်အထိစစ်မှန် t ကို,ဒါကြောင့်သင်တွေ့ကြုံခံစားနိုင်ပါတယ်“သင်စားနိုင်သောက်ပါ&ကဗျာ;နှင့်ဝါး!မင်းရဲ့ bobas ကိုသကြားညိုနဲ့ချိုစေပါ,သကြားဓာတ်,သင့်ရဲ့အချိုရည်ကိုပျားရည်သို့မဟုတ် fructose နှင့်မြှင့်တင်ရန်. ထိုင်ဝမ်က Black Tapokaoca ပုလဲ,ရိုးရှင်းပြီးလက်ငင်း,သင်အချိန်မရွေးပျော်မွေ့နိုင်သည်!ထုပ်ပိုးမှုတစ်ခုချင်းစီ၏အလေးချိန်သည်မှန်ကန်သည်,သီးသန့်မော်ဂျူလ်ပုံသေနည်း၏ရွှေအချိုး,အရသာ chewy ဖြစ်ပါတယ်,နှင့်နို့လက်ဖက်ရည်ပို။ ပင်နူးညံ့သောလိမ့်မည်! Boba ပုလဲသည်အချိုရည်အတွက်အလွန်သင့်တော်သည်,နှင့် slush ထည့်သွင်း,သကြား,သစ်သီးဖျော်ရည်များ,လက်ဖက်ရည်ကြမ်းများ,အေးခဲဒိန်ချဉ်,ရေခဲရေ,ပင်အရက်ကော့တေး.လှုပ်,ဆွဲဆောင်မှုရှိသောအရောင်များကိုထည့်ရန်မည်သည့်ဖျော်ရည်ကိုမဆိုရောစပ်ပါ
Tapjoka Balls များသည် Tapjoka မှထုတ်လုပ်သည့်စတုဲလုံးများဖြစ်သည်,အဆိုပါပီလောပီနံအမြစ်ကနေထုတ်ယူတဲ့ဓာတ်.၎င်းတို့ကို boba ဟုအများအားဖြင့်ခေါ်ကြသည်(များအတွက်စကားလုံးတစ် ဦး Transliteration“ပူဖောင်း&ကဗျာ;)သို့မဟုတ်ပူဖောင်းလက်ဖက်ရည်ရှိသည့်အခါပုလဲ.Tapioca Balls ပုံစံအမျိုးမျိုးတွင်မူရင်းအနက်ရောင်ပါ ၀ င်သည်,အရသာ,ခဏခဏ,အသေးစား,နှင့်ရှင်းရှင်းလင်းလင်း.ကွဲပြားခြားနားသောပါဝင်ပစ္စည်းများထည့်သွင်းခြင်းအားဖြင့်,ရေလို,သကြား,နှင့်ရာသီ,Tapioka Balls များကိုအရောင်နှင့်အရောင်အမျိုးမျိုးကွဲပြားနိုင်သည်. Tapioka Balls များသည်သောက်ရန်အလွန်သင့်တော်သည်,နှင့် slush ထည့်သွင်း,သကြား,သစ်သီးဖျော်ရည်များ,လက်ဖက်ရည်ကြမ်းများ,အေးခဲဒိန်ချဉ်,ရေခဲရေ,ပင်အရက်ကော့တေး.လှုပ်,ဆွဲဆောင်မှုရှိသောအရောင်များကိုထည့်ရန်မည်သည့်ဖျော်ရည်ကိုမဆိုရောစပ်ပါ.
ရှုပ်ထွေးသောချိုမြိန်သောအရသာနှင့်ပေါင်းစပ်ထားသောအရသာရှိခြင်း,ကျွန်ုပ်တို့၏ Pomegranate Boba သည်အချိုရည်များနှင့်ပျော်စရာကောင်းသောဖျော်ရည်များနှင့်အချိုရည်များကိုအေးအေးဆေးဆေးသောက်နိုင်သည်.အရည်ရွှမ်းသောပူဖောင်းတစ်ခုစီသည်သင့်ကိုအရသာရှိစေမည့်ဘူးသီးများကိုသီဆိုစေမည့်ထူးခြားသောဖွဲ့စည်းမှုကိုထည့်သွင်းထားခြင်းဖြင့်အားကောင်းလှသောစွမ်းရည်ကိုထုပ်ပိုးထားသည်.တိုင်းနှလုံးကျန်းမာဇွန်းနှင့်အတူ,ကျွန်ုပ်တို့၏ Grenadine Boba သည်သင်၏အချိုပွဲတွင်မွှေးကြိုင်သောအပြင်ထပ်မံထည့်သွင်းပေးသည်.တိုင်းပူဖောင်းနှင့်အတူ,သင်၏ခံတွင်းသည်ချက်ချင်းအစက်အပြောက်သို့ရောက်သော antioxidants အမြောက်အများကိုရရှိသည်. သလဲသီး Boba သည်သောက်ရန်အလွန်သင့်တော်သည်,နှင့် slush ထည့်သွင်း,သကြား,သစ်သီးဖျော်ရည်များ,လက်ဖက်ရည်ကြမ်းများ,အေးခဲဒိန်ချဉ်,ရေခဲရေ,ပင်အရက်ကော့တေး.လှုပ်,ဆွဲဆောင်မှုရှိသောအရောင်များကိုထည့်ရန်မည်သည့်ဖျော်ရည်ကိုမဆိုရောစပ်ပါ.
Boba Tapioca ပုလဲ
ကျွန်ုပ်တို့၏ Boba Tapioca Pearls အသစ်တင်ဆက်သည့်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဂုဏ်ယူပါသည်!အဆိုပါ tapocaoca ဘောလုံးမြင့်မားသောနှင့်အတူလုပ်နေကြသည်-အရည်အသွေး tapioka ဓာတ်ဓာတ်.ကြည်လင်သောဘောလုံး၏ချိုမြိန်ခြင်းနှင့်ဝါးခြင်းတို့သည်ဂန္များနှင့်ဆင်တူသည်.အဆိုပါစိုထိုင်းသောအသွင်အပြင်သည်အဖျော်ယမကာကိုလန်းဆန်းစေနိုင်သည်.ဒါဟာအလွန်ကြီးစွာသော add ဖြစ်ပါတယ်-နွေရာသီအတွက်သင့်ရဲ့အထူး menus များပေါ်တွင်,သို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောမင်္ဂလာဆောင်အဖြစ်အခါသမယ,မွေးနေ့ပါတီများ.လက်ဖက်ရည်သို့မဟုတ်ရည်နှင့်စင်ကြယ်သော Boba Tapioca Pearls များကိုစမ်းကြည့်ပါ-ကြီးမားသော boba ကောက်ရိုးနှင့်အတူအခြေစိုက်အဖျော်ယမကာ.မင်းနိုင်ခဲ့တယ်&တောင်ကြီးမြို့;t ကိုစိတ်ပျက်. Boba Tapioca Pearls သည်အချိုရည်အတွက်အလွန်သင့်တော်သည်,နှင့် slush ထည့်သွင်း,သကြား,သစ်သီးဖျော်ရည်များ,လက်ဖက်ရည်ကြမ်းများ,အေးခဲဒိန်ချဉ်,ရေခဲရေ,ပင်အရက်ကော့တေး.လှုပ်,ဆွဲဆောင်မှုရှိသောအရောင်များကိုထည့်ရန်မည်သည့်ဖျော်ရည်ကိုမဆိုရောစပ်ပါ.
စတော်ဘယ်ရီ Tapioca ပုလဲ
ချိုမြိန်ထည့်ပါ,ကျွန်ုပ်တို့၏စတော်ဘယ်ရီတာအိုပီကာပုလဲနှင့်သင်၏ပူဖောင်းလက်ဖက်ရည်နှင့်အချိုပွဲများသို့စတော်ဘယ်ရီ၏လတ်ဆတ်သောအရသာ.တောက်ပသောဘောလုံးတစ်ခုစီသည်တောက်ပသော berry သီးအရသာနှင့်ပြည့်ဝသောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံတို့ဖြင့်ပြည့်နှက်နေသည်,သင့်ရဲ့ဆီးနှင်းခဲသို့မဟုတ်ရေခဲလက်ဖက်ရည်အတွက်နွေရာသီပျော်ပွဲစား၏အရသာဆောင်ခဲ့.တစ် ဦး topping အဖြစ်မဆိုအချိုရည်ထဲသို့သွင်းနိုင်ပါသည်.အကောင်းဆုံးသောထိုကဲ့သို့သောအေးခဲဒိန်ချဉ်သို့မဟုတ်ရေခဲမုန့်အဖြစ်အအေးရယူထားသောနှင့်အတူတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်.သောက်စရာ Chaser သို့မဟုတ်အခြားအချိုပွဲ topping အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်. စတော်ဘယ်ရီတာအိုစီကာပုလဲများသည်သောက်ရန်အလွန်သင့်လျော်သည်,နှင့် slush ထည့်သွင်း,သကြား,သစ်သီးဖျော်ရည်များ,လက်ဖက်ရည်ကြမ်းများ,အေးခဲဒိန်ချဉ်,ရေခဲရေ,ပင်အရက်ကော့တေး.လှုပ်,ဆွဲဆောင်မှုရှိသောအရောင်များကိုထည့်ရန်မည်သည့်ဖျော်ရည်ကိုမဆိုရောစပ်ပါ.
Mango Tapioca ပုလဲ
Sinfully ချိုမြိန်ခြင်းနှင့် tantalizingly အပူပိုင်းဒေသ,ကျွန်ုပ်တို့၏ Mango Tapioca ပုလဲသည်လတ်ဆတ်လာသည်,အေးခဲနေသောဒိန်ချဉ်နှင့်ထူးခြားသောအရသာ,ပူဖောင်းလက်ဖက်ရည်နှင့်ဆီးနှင်းခဲ.ထူးခြားသော texture တပ်ဆင်ထားသည်,ပူဖောင်းတစ်ခုစီသည်သင်၏ပါးစပ်ထဲသို့အရသာထူးခြားသည့်အရသာရှိစေရန်ပြုလုပ်သည်.ကျွန်ုပ်တို့၏ Mango Tapioca Pearls ကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်သောအေးခဲနေသောအဖျော်ယမကာကိုကမ်းခြေတစ်ခုတွင်ထည့်ပါ-ထိုက်တန်အရသာထွက်ပြေးဖို့. ရက်ရောစွာရေငုပ်။ သင်၏သောက်စရာသို့မဟုတ်အချိုပွဲရွေးချယ်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့၏ Mango Tapioca Pearls ဖြင့်အလှဆင်ပါ.အရသာတစ်ခု,အစေခံရန်အဆင်သင့်,ချက်ပြုတ်ရန်မလိုအပ်ပါ,tapocaoka ပုလဲများအတွက်စားသုံးနိုင်သောအစားထိုး!ရေခဲမုန့်ပေါ်တွင်သုံးပါ,ဒိန်ချဥ်,လက်ဖက်ရည်ကြမ်းသောက်ခြင်းနှင့်ကိတ်မုန့်ပေါ်တွင်အလှဆင်,စသည်တို့. Mango Tapioca ပုလဲများသည်သောက်ရန်အလွန်သင့်လျော်သည်,နှင့် slush ထည့်သွင်း,သကြား,သစ်သီးဖျော်ရည်များ,လက်ဖက်ရည်ကြမ်းများ,အေးခဲဒိန်ချဉ်,ရေခဲရေ,ပင်အရက်ကော့တေး.လှုပ်,ဆွဲဆောင်မှုရှိသောအရောင်များကိုထည့်ရန်မည်သည့်ဖျော်ရည်ကိုမဆိုရောစပ်ပါ.
Lychee Tapioca ပုလဲ
Lychee Tapioca ပုလဲတိုးတက်ခဲ့သည်!ပုံသေနည်းအသစ်သည်သင်ထိုင်ဝမ်စျေးကွက်မှသင်ရွေးချယ်သည့်ခေါက်ကောင်များ၏အရသာနှင့်တူသည်.ရှင်းတဲ့ပုလဲ,ပန်းမွှေးရနံ့နှင့်အပူပိုင်းချိုသောအရသာကျန်ရှိနေသေးသည်,ရှည်လျားသောနှင့်အတူတစ် ဦး ထက်ပိုသော earthy ဝဲသယ်ဆောင်,အမွှေးအကြိုင်.ရေခဲလက်ဖက်ခြောက်ထဲထည့်ရန်၎င်းကိုအသုံးပြုပါ,boba ဖျော်ရည်,သို့မဟုတ်ရေခဲ-ရောစပ်သစ်သီးဖျော်ရည်.Lychee Tapioca Pearls များကိုလည်းအေးခဲသောဒိန်ချဉ်တွင်ထည့်နိုင်သည်.အချို့သောစတိုးဆိုင်များကဤထုတ်ကုန်ကိုရေခဲမုန့်ပေါ်တွင်အလှဆင်ခြင်းအဖြစ်အသုံးပြုသည်. Lychee Tapioca Pearls သည်အချိုရည်အတွက်အလွန်သင့်တော်သည်,နှင့် slush ထည့်သွင်း,သကြား,သစ်သီးဖျော်ရည်များ,လက်ဖက်ရည်ကြမ်းများ,အေးခဲဒိန်ချဉ်,ရေခဲရေ,ပင်အရက်ကော့တေး.လှုပ်,ဆွဲဆောင်မှုရှိသောအရောင်များကိုထည့်ရန်မည်သည့်ဖျော်ရည်ကိုမဆိုရောစပ်ပါ.
Boba Popping မှာ,ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်ရိုးရာအရသာများသာမကခက်ခဲစွာပါ ၀ င်နိုင်ခြင်းအတွက်မိမိတို့ကိုယ်ကိုဂုဏ်ယူသည်-ရန်-အပူပိုင်းအရသာရှာဖွေပါ.အေးခဲသောဒိန်ချဉ်တွင်စပျစ်သီးကိုထည့်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်.အချို့သောစတိုးဆိုင်များကဤထုတ်ကုန်ကိုရေခဲမုန့်ပေါ်တွင်အလှဆင်ခြင်းအဖြစ်အသုံးပြုသည်.အေးခဲနေသောဒိန်ချဉ်အရသာအပြင်,စပျစ်သီး Boba ကိုပူဖောင်းနို့လက်ဖက်ရည်အရသာအတွက်လည်းအသုံးပြုသည်,boba ဖျော်ရည်,ရေခဲ-ရောစပ်သစ်သီးဖျော်ရည်,နှင့်ဆီးနှင်းတစ်မျိုးသို့မဟုတ်ရိတ်ရေခဲထုတ်ကုန်များပင်.Boba သစ်သီးဖျော်ရည်များသည်လန်းဆန်းပြီးပူပြင်း။ အအေးလွန်ကဲသည်.ငါတို့ကိုအရသာရှိတဲ့လက်ဖက်ရည်တစ်ခွက်လောက်သောက်ပါ! စပျစ်သီး Boba သည်အချိုရည်အတွက်အလွန်သင့်တော်သည်,နှင့် slush ထည့်သွင်း,သကြား,သစ်သီးဖျော်ရည်များ,လက်ဖက်ရည်ကြမ်းများ,အေးခဲဒိန်ချဉ်,ရေခဲရေ,ပင်အရက်ကော့တေး.လှုပ်,ဆွဲဆောင်မှုရှိသောအရောင်များကိုထည့်ရန်မည်သည့်ဖျော်ရည်ကိုမဆိုရောစပ်ပါ.
ကော်ဖီ Tapioca ပုလဲ
သာမန် tapoca မှပုလဲများသည်အလွန်များပြားသည်,ဒါပေမယ့်သင်ကော်ဖီ Tapioca Pearls ကြိုးစားခဲ့ပြီ?ကော်ဖီ Tapioca Pearls သွက်လက်စွာထွက်လာသည်,အနည်းငယ်ချိုမြိန်သေး။ ပျော်စရာ tapocaoca texture ရှိသည်.တကိုက်ပြီးနောက်,ထူကော်ဖီပျော့ဖတ်ချက်ချင်းပါးစပ်သို့ကွဲ. အရသာရှိတဲ့ကော်ဖီအချိုရည်ဒါမှမဟုတ်ကော်ဖီပူဖောင်းလက်ဖက်ရည်ကိုဖန်တီးပါ!သငျသညျအဘို့အလျင်မြန်စွာအဘို့အ vanilla ဒိန်ချဉ်နှင့်အတူကော်ဖီ Tapioca Pearls ထိပ်ဆုံးနိုင်ပါတယ်,လွယ်ကူသောအချိုပွဲ.နောက်အဆင့်သို့ကော်ဖီသောက်ပါနှင့်သူတို့နှင့်အတူကော်ဖီလုပ်ပါ,Boba ကော်ဖီကိုသင်ကြိုးစားပြီးသည်နှင့်သင်ချစ်မြတ်နိုးမည်. ကော်ဖီ Tapioca Pearls သည်အချိုရည်အတွက်အလွန်သင့်လျော်သည်,နှင့် slush ထည့်သွင်း,သကြား,သစ်သီးဖျော်ရည်များ,လက်ဖက်ရည်ကြမ်းများ,အေးခဲဒိန်ချဉ်,ရေခဲရေ,ပင်အရက်ကော့တေး.လှုပ်,ဆွဲဆောင်မှုရှိသောအရောင်များကိုထည့်ရန်မည်သည့်ဖျော်ရည်ကိုမဆိုရောစပ်ပါ.
ထုတ်ကုန်အသစ်မူပိုင်ခွင့်,လက်ဖက်ရည်အနက်ရောင် Boba,အရသာရှိတယ်,အစာရှောင်ခြင်းနှင့်အဆင်ပြေ.Unpacking ကိုသာအပူလိုအပ်သည်,ချက်ချင်းခံစားကြည့်ပါ.အပူအနက်ရောင်လက်ဖက်ရည် Boba,ရောနှောဖို့နို့နှင့်ရေခဲ Cube ထည့်ပါ,ကမ္ဘာတစ်လွှားလူကြိုက်များသောသောက်စရာတစ်ခွက်ကိုသင်ချက်ချင်းသောက်နိုင်သည်! ရက်ရောစွာရေငုပ်။ သင်၏အချိုရည်သို့မဟုတ်ရွေးချယ်မှုအချိုပွဲကိုကျွန်ုပ်တို့၏မူလ Black Tea Boba ဖြင့်အလှဆင်ပါ.အရသာသောချိုမြိန်ခြင်းနှင့် chewy ဘောလုံး,အစေခံရန်အဆင်သင့်,ချက်ပြုတ်ရန်မလိုအပ်ပါ,tapocaoka ပုလဲများအတွက်စားသုံးနိုင်သောအစားထိုး!ရေခဲမုန့်ပေါ်တွင်သုံးပါ,ဒိန်ချဥ်,လက်ဖက်ရည်ကြမ်းသောက်ခြင်းနှင့်ကိတ်မုန့်ပေါ်တွင်အလှဆင်,စသည်တို့. Black Tea Boba သည်သောက်ရန်အလွန်သင့်တော်သည်,နှင့် slush ထည့်သွင်း,သကြား,သစ်သီးဖျော်ရည်များ,လက်ဖက်ရည်ကြမ်းများ,အေးခဲဒိန်ချဉ်,ရေခဲရေ,ပင်အရက်ကော့တေး.လှုပ်,ဆွဲဆောင်မှုရှိသောအရောင်များကိုထည့်ရန်မည်သည့်ဖျော်ရည်ကိုမဆိုရောစပ်ပါ.